Madheshvani : The voice of Madhesh - सरकारले मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वमा धकेल्दैछ : डा.नारायण खड्का
० कांग्रेसका उपसभापति सांसद विजय कुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरूद्ध अख्तियारले आरोपपत्र दर्ता गराएको छ । यो घटनालाई काँग्रेसले कसरी लिएको छ ?
— नेपालमा फेरि अर्को संकटको वातावरण बन्दै गएको छ । त्यो वातावरण उत्कर्षतर्फ उन्मुख हुन लागेको हो । फेरि अर्को संकटमा देश फस्न गइरहेको छ । विजय गच्छदारजीको मात्रै मुद्दा हैन, मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने, मानवअधिकार, नेपाली सेना लगायतका क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार बढाएर लाने देखिएको छ । यसमा कहीं न कहीं चिनियाँ सिद्धान्त, सि जिनपिङको दर्शन अधिनायकवादको धङ्धङ्गीबाट उत्प्रेरित भएर त्यो दिशातिर सरकार अग्रसर भइरहेको छ । त्यसैले मुलुक फेरि अर्को द्वन्द्वमा जाने खतरा छ ।
० भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नु वा अनियमितताविरूद्ध कारबाही हुनु कसरी अर्को संकटको संकेत हो ?
— भ्रष्टाचारको मुद्दामा सबैलाई विश्वास हुने खालको, समानता र न्यायमा आधारित, राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेको सन्देश दिन सक्नुप¥यो । कसैलाई मुद्दा लाग्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिने, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले मुरली बजाउँदै धन्न मैले बालुवाटारमा जग्गा किनेनछु नभए म पनि फस्थेँ भनेर भन्ने ? उहाँकै सहयोगी मान्छे जग्गा किन्ने तर नफस्ने लगायतका अनेकौं प्रश्नहरू अहिले उब्जाएको छ । यो सरकारको दुई वर्षे कार्यकालमा खड्गप्रसादजीले एउटा संकट निम्त्याउने तिर मुलुकलाई डोर्‍याउँदै हुनुहुन्छ ।
० त्यसो भए आग्रह र पूर्वाग्रहको आधारमा अहिले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको भन्ने तपाइको निष्कर्ष हो ?
— त्यो त प्रष्टै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आफैले भनेको कुराबाट स्पष्ट हुन्छ । उहाँले जसरी भन्नुभयो कि धन्न बालुवाटारको जग्गा लिएनछु, नत्र म पनि फँस्थें । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
० विजय गच्छदारविरूद्ध आरोपपत्र दायर भइसकेपछि अब उहाँ सांसद पदबाट निलम्बित हुनुभयो ?
— संविधानले त त्यहीं भन्छ । उहाँमाथि मुद्दा लागिसकेपछि फैसला नभएसम्म निलम्बित अवस्थामै रहनुहुन्छ । हामीले संविधानमा कानून नै यस्तो बनाएका छौं । त्यो मुद्दा कतिको पारदर्शी, न्यायपूर्ण छ बहसको विषय हो । त्यही मुद्दामा एकलाई उन्मुक्ति दिने, अर्कोलाई कारबाही गर्ने त्यसको बारेमा सरसल्लाह होला । हामीले यो मुद्दा अनुचित र पूर्वाग्रही छ भनेर भनिरहेका छौं । तर, मुद्दा चलाइसकेपछि निलम्बनकै प्रक्रिया हुन्छ । फैसला भएपछि उहाँले यदि मुद्दा जित्नुभयो भने पुनः निलम्बन फुकुवा हुन्छ ।
० यसमा कांग्रेसको धारणा के छ ?
— निष्पक्ष, नयायपूर्ण देखिनुप¥यो भन्ने कांग्रेसको धारणा हो । तर, त्यस्तो देखिँदैन । त्यहीं मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्री कसरी उम्किन पाउँछन् त ? बालुवाटारमा जग्गा लिएका मान्छे अहिले जग्गा फिर्ता ग¥यो भनेर केही पनि नगर्ने, यसको जवाफ हामीले अख्तियारमा खोजेका छौं ।
० तपाइँले मुलुक अर्को द्वन्द्वमा फँस्ने भन्नुभयो, कस्तो किसिमको द्वन्द्व हो ?
— एकातिर अधिकारलाई संकुचित गर्दै जाने, प्रतिपक्षीलाई दबाउँदै जाने, न्यायपूर्वक ढंगबाट मुद्दाहरू नचलाउने, कानूनीरूपमा खड्गप्रसादजीले सबै अधिकार आफू मातहत राख्न खोज्ने लगायतका कुराहरूले प्रष्ट संकेत गर्दैछ कि मुलुकमा पुनः द्वन्द्व निम्त्याउन खोजिँदैछ । भ्रष्टाचार त्यतिकै बढ्दै गएको छ, भ्रष्टाचारको मुद्दामा पूर्वाग्रही ढंगबाट कारबाही हुँदैछ । यो सरकारले आफ्नो मान्छेलाई संरक्षण गर्दै गइरहेको छ । यो सबै वातावरण संकट निर्माण हुने तर्फ उन्मुख छ ।
० भ्रष्टाचार अहिले मात्र बढेको हो त ?
— केही केही पहिलाका पनि छन् तर अहिले सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको छ । दिनहुँ भ्रष्टाचार मुद्दामा रंगेहात समातिएका छन् । यस्ता थुप्रै मुद्दाहरू छन् । एनसेल, वाइडबडी लगायतका कुराहरू छन् ।
० यो सरकार चीनको प्रभावमा पनि परेको हो ?
— अस्ति हेर्नुभएन, चीनबाट ५०–६० जना ल्याएर प्रशिक्षण दिइयो । यो लाजमर्दो कुरो भएन । कम्युनिष्ट छौं, लोकतान्त्रिक छौं भनेर भन्ने र चीनबाट मान्छे बोलाएर यहाँका कम्युनिष्टहरूलाई प्रशिक्षण दिने, कसरी शासन गर्ने, कसरी सुशासन कार्य गर्ने, कम्युनिष्ट शासन भनेको के हो ? यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपालका कम्युनिष्टहरू कम्युनिष्ट नै होइनन् वा विदेशीको प्रभावमा परिरहेका छन् । हामीले भन्नै पर्दैन, त्यसै छर्लङ्ग भइरहेको छ ।
० नेपाली कांग्रेसले संसदमा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका किन निर्वाह गर्न सकेको छैन ?
— जसले पनि कांग्रेसमाथि यहीं आरोप लगाउँछन् । तर, प्रतिपक्षी भनेको के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । हामी कम्युनिष्टहरूको उत्पात मचाउने, सडक जाम गर्ने, संसदमा कुर्सी भाँच्ने, सभामुखमाथि हात हाल्ने, बजेट भाषण च्यात्ने उग्रवादी खालको प्रतिपक्षी होइनौं । भोलीका दिनमा कम्युनिष्टहरूलाई पनि कसरी व्यवस्थित, अनुशासित भएर संसदमा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउने पनि हो । हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार हिंडेका छौं । त्यसैले हामी उताउलो भएर प्रस्तुत भएका छौं । 4
० सभामुखको निर्वाचनमा कांग्रेसको उम्मेदवारी किन परेन ?
— हामीले सदनमा सहमतिको वातावरण बनाएर जाऔं भन्ने सन्देश दिएका छौं । संविधानको भावनाअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक पार्टी र लिङ्गको हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेका छौं । हामीले नेकपाकै उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर एउटा सहमतिको वातावरण बनाउन खोजेका हौं ।
० निर्वाचन भनेको त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो नि ?
— निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनु नै पर्छ भन्ने छैन । कहिलेकाँही चुनावमा सहकार्य वा गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । एकले अर्कोलाई समर्थन गर्नका लागि पनि उम्मेदवार खडा गर्नु आवश्यक हुँदैन ।
० कांग्रेसलाई उपसभामुख दिने भन्ने सहमति भएको हो ?
— त्यस्तो केही सहमति भएको छैन । हामीलाई उपसभामुख दिनुस्, सभामुखमा हाम्रो उम्मेदवारी रहँदैन भनेर भनेका पनि छैनौं । अब नेकपाले के निर्णय गर्छ, यो उनीहरूको कुरा हो ।
० उपसभामुखका लागि कांग्रेसको दाबेदारी कतिको छ ?
— निश्चितरूपमा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो र उपसभामुख कांग्रेसले पाउनुपर्छ । तर, यसको निर्णय नेकपाले नै गर्ने हो । नेकपाले यदि कांग्रेसबाहेक अन्य दललाई दिन चाह्यो भने हामीले उम्मेदवार खडा गर्ने काम मात्रै हुन्छ । गणितीय हिसाबले संसदमा अहिले नेकपाकै बहुमत रहेकोले उपसभामुख कसलाई दिने त्यो उसको कुरा हो । हामी नजिते पनि उपसभामुख उम्मेदवारका लागि सल्लाह गर्छौं ।
० कांग्रेसभित्रका विवादहरू कतिको मिल्यो ?
— नेपाली कांग्रेस अलि बढी नै लोकतान्त्रिक पार्टी हो । हरेक कुरामा बहस र छलफल हुने, हरेक कुरा सतहमा आउने खालको लोकतान्त्रिक ढंग छ हाम्रो । सबैलाई राजनीतिक स्पेस चाहिन्छ, यसमा कतिको हतारो पनि देखिन्छ । त्यसले अलिकति संयमता पनि गुमाएको हामी देख्छौं । तर पनि विवाद आउँछन्, मिल्छन् । लोकतान्त्रिक पार्टीमा छलफल र बहस हुनुलाई विवाद भन्न सकिँदैन । हामी आपसी सहमति र सहकार्यबाट विवादहरू समाधान गर्छौं ।
० नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको तयारी कस्तो हुँदैछ ?
— १४औं महाधिवेशनको तयारीमा अब हामी लाग्छौं । क्रियाशीय सदस्य, नवीकरण लगायतका प्रक्रियाहरू अब सुरू हुँदैछ । वडा, गाउँ, नगर, क्षेत्र, प्रदेश हुँदै फागुनको पहिलो साता महाधिवेशन गर्दैछौं ।
० तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ ?
— तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नुको अर्को विकल्प छैन । संविधानमा निकै ठूलो संकट आइप¥यो भने ६ महिना म्याद थप्न सकिन्छ । अहिले हामीसँग पूरै एक वर्ष समय छ । यो समयसम्म सबै तयारी पूरा गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौं । महाधिवेशनबाट आन्तरिक कुराहरूबारे छलफल हुन्छ, त्यसले महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्दैन ।
० नेविसंघको विवादहरू देखिएको थियो, पार्टी कार्यालयमा झडप नै भएको थियो । त्यो विवाद मिल्यो ?
— नेविसंघको विवाद पनि अब मिल्दै गएको छ । केन्द्रीय सदस्यका लागि पनि सहमति भइसकेको छ ।
० विजय गच्छदार पक्षका नेता कार्यकर्ताहरू पनि अहिलेसम्म समायोजन हुन सकेका छैनन् नि ?
— उहाँका नेता कार्यकर्ताको समायोजन प्रक्रियामा छौं । यसका लागि हामीले कार्यदल बनाएका छौं । त्यो कार्यदलले काम पनि गरिरहेको छ ।